कति असुरक्षित छ मलेसिया नेपालीका लागि ? दैनिक एकजनाको मृत्यु Archives - Nepal Japan
नेपाली समय : 03:01:36
जापानी समय : 06:16:36
Tag: कति असुरक्षित छ मलेसिया नेपालीका लागि ? दैनिक एकजनाको मृत्यु
कति असुरक्षित छ मलेसिया नेपालीका लागि ? दैनिक एकजनाको मृत्यु
Posted on December 11, 2018 December 12, 2018 by Yadav Devkota
नेपालीहरुका लागि वैदेशिक रोजगारीको पहिलो गन्तव्य बनेको मलेसिया कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने त त्यहाँ नेपालीमाथि घटेका अनेक घटनाहरुले सिद्ध गरिरहेका छन् । मलेसियामा दैनिकजसो एक नेपालीको मृत्यु हुने गरेको छ ।
मलेसिया आइपुगेका नेपाली कामदारमध्ये दैनिक एक जनाको अकालमै ज्यान जाने गरेका छ । आत्महत्या, सडक दुर्घटना, कारखाना दुर्घटना, कडा रोगका कारण उनीहरुको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपाली कामदारका लागि सेवा सुविधा अनि सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै नेपाल सरकारले मलेसियासंग श्रम सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन भैसकेको छैन । अहिले मलेसिया वैदेशिक रोजगारीका लागि बन्द छ ।
Posted in प्रबासTagged कति असुरक्षित छ मलेसिया नेपालीका लागि ? दैनिक एकजनाको मृत्यु